यी हुन् विश्वका सबैभन्दा उत्कृष्ट र सबैभन्दा खराब विमान कम्पनी - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा उत्कृष्ट र सबैभन्दा खराब विमान कम्पनी
२ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १०:०६
विश्वभर चल्ने विमान कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो र स्तरीय सेवा दिने को होला ? धेरैले अनुमान लगाउन सक्छन्।
यसपछिका विमान कम्पनीबारे भने धेरैको अनुमान फेल पनि खान सक्छ । हो, पहिलो स्थानमा कतार एयरवेज छ । यसको पछि अमेरिकन एयरलायन्स, एरोमेक्सिको, एसएएस, क्यान्डिभियन एयरलायन्स र क्वान्तास परेका छन् । सबैभन्दा तलको स्थानमा भने रायन एयर, कोरियन एयर, कुवेत एयरवेज, बेलायतको इजिजेट र थोमस कुक एयरलायन्स परेका छन्।
एयर हेल्प अर्गनाइजेसनले सन् २०१८ मा विश्वभर चल्ने ७२ वटा विमानहरूको अध्ययन गरेको थियो । हेल्पले तत्क्षण दिने कार्यकुशलता, दाबी प्रक्रिया, सेवाको गुणस्तरको अध्ययन गरेको थियो । र, सबैलाई समान अंक दिएको थियो।
‘राम्रो मौसमको अवस्थाले उडानमा कमै मात्र समस्या परेको देखिन्छ,’ एयर हेल्पका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेनरिक जिलमरले भने । अध्ययन अवधिमा बढ्दो यात्रुको चापसँगै विमान कम्पनीहरूले आफ्नो सेवाको गुणस्तरमा उत्साहजनक सुधार ल्याएको जिलमरले बताए।
सबैभन्दा ठूलो फड्को भने अमेरिकन एयरलायन्सले मारेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २३औँ स्थानमा रहेको उक्त विमान सन् २०१९ को अध्ययनमा भने दोस्रो स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ । ‘मलाई छक्क लागेको छ, कोरियन एयरलायन्स भने निकै तल ओर्लियो,’ उनले भने, ‘यो त एसियाकै राम्रो कम्पनी थियो।’
युनाइटेड र डेल्टा एयरलायन्स पनि सन् २०१७ को तुलनामा निकै माथि उक्लेका छन् । यी कम्पनी पहिले ३७ र ४७औँ श्रेणीमा थिए । अहिले उक्लेर १६ र १७औँ स्थानमा पुगेका छन् । एरोमेक्सिकोले त चमत्कारै गर्‍यो । २६औँ स्थानमा रहेको यो विमान कम्पनी तेस्रो स्थानमा पुगेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि विमान कम्पनीहरूले आफ्नो दाबी समस्या समाधानमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यात्रुले आफ्ना सरसामानमा गरेको दाबीलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने परिपाटी कुनै एयरलायन्समा नरहेको जिलमर बताउँछन् । अर्कातर्फ सानो–सानो मौसमको खराबीले पनि उडान रद्द गर्ने परिपाटी छ । यसले यात्रुले लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘ती यात्रुलाई अर्को उडानबाट छिटै गन्तव्यमा पुग्ने गरी कुनै अर्को व्यवस्था गरिँदैन,’ उनले भन, ‘यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ नयाँपत्रिकाले यो खबर छापेको छ।
(सेवा दिने मामिलामा)
नेकपाको १४७ पोलिटब्युरो सदस्यको नाम तयार, को को परे?
रुपक र निकिताको ‘तिमी सधैं’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक